Madaxweyne Sekmen Ayaa Ka Qayb Galay Shir Madaxeedkii Gaadiidka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum ReviewMadaxweyne Sekmen wuxuu ka qeyb galay Shirkii Gaadiidka
30 / 04 / 2020 25 Erzurum Review, tareenka, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, TURKEY
madaxweynaha ayaa qayb ahaan kaqeyb galay shirkii gaadiidka
Duqa Magaalada Erzurum Magaalada Mehmet Sekmen ayaa la kulmay Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu iyaga oo u maraya nidaamka shirka fiidiyowga. AK Party Erzurum ku xigeenkiisa Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu iyo İbrahim Aydemir ayaa ka soo qeyb galay kulanka, waxaana ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Erzurum Okay Memiş iyo madaxa xisbiga AK Party Erzurum Madaxa Mehmet Emin Öz. Kulankii uu Duqa Magaaladda Mehmet Sekmen la wadaagay macluumaadka ku saabsan mashaariicda gaadiidka ee Erzurum, ayuu Wasiir Karaismailoğlu muujiyey aragtidiisa ku aaddan maal-gashiga dawladda ee Erzurum iyo gobolka. Intii lagu jiray kulanka, oo xaaladdii ugu dambeysay lagu qiimeeyay iyo sidoo kale tillaabooyinka gaadiidka ee la qaaday xilligii uu cudurkan faafayay, Wasiir Karaismailoğlu wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan carqalad ku imaan doonin maal-gashiga ay wasaaradu qorsheysay.
GAADIIDKA CARRUURTA EE SEKMEN
Duqa Magaalada Mehmet Sekmen Duqa Magaalada ayaa sheegay in gaadiidku ay door muhiim ah kaleeyihiin gaarista hadafyadan kulanka, halkaas oo Erzurum uu tilmaamay inay hadafyo aad u waaweyn ka leedahay dhanka dalxiiska, gaar ahaan xagaaga iyo isboortiga xilliga qaboobaha. Isagoo cadeeyay rabitaankooda ah inay soo bandhigaan qaab gaar ah oo ay ula gaaraan Erzurum iyo gobolka, gaar ahaan dhanka gaadiidka cirka, Madaxweyne Sekmen wuxuu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay ku soo bandhigaan nidaamka gaadiidka tareenka ee Erzurum. Kulankii lagu qabtay nidaamka kulanka fiidiyowga, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu, oo sidoo kale isweydaarsaday aragtida wafdiga Erzurum, ayaa xustay in mashaariic maalgashi oo aad u culus laga fuliyey dhulka, garoonka diyaaradaha iyo gadiidka tareenka ee Bariga Gobolka Anatolia isla markaana howshu ay sii socon doonto iyada oo aan carqalad laheeyn.
QIIMAYNTA GUUD EE MADAXWEYNAHA MADAXWEYNAHA
Dhinaca kale, Madaxweyne Mehmet Sekmen ayaa tilmaamay in Erzurum ay noqon doonto xarun soo jiidasho leh oo leh fursadoheeda gaadiid iyo fursadaha kadib kulanka uu la qaatay Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu. Madaxweyne Sekmen wuxuu yiri: “Waxaan kala hadalnay Wasiirka Gaadiidka wax ku saabsan mashaariicda gaadiidka ee quseeya magaaladeena iyo gobolkayaga, oo annaguna waxaan sheegnay baahiyadeena iyo waxaan fileynay. Maalgalinta Ovit Tunnel, oo ku xidhi doonta Erzurum iyo gobolka illaa Badda Madow, waxaan sheegnay in waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dhammeystiraa tunalliyada Dallıkavak iyo Kırık si loo gaaro ujeeddada dhabta ah. Waxaan qiimeyn ku sameyn jirnay safarka dalxiiska iyo gaadiidka, waxaanan la wadaagi jirnay rajadayada Wasiirkayagan. Wasiirkayagu sidoo kale wuxuu naga codsaday inaan ku faraxsanaano marka loo eego maalgashiga gaadiidka ee quseeya Erzurum iyo gobolka. Waxaan uga mahadcelineynaa Wasiirkayaga dantiisa dhow iyo gaar ahaan qaabkii magaaladiisa. ”
Tareenka Ruushka ee Ruushka ayaa imanaya kulankan APEC 2012 ee magaalada Vladivastok
Tareenka bandhigga wuxuu ku yimaadaa APEC 2012 oo ku yaala magaalada Vladivastok
Skiers ayaa qabsaday isbedelka caanka ah
Sekmen, Ujeedkeenu waa inaan Erzurum, Davos ku ciyaaro Isboortiga
Sekmen Abaalmarinta Ardayda Soogalootiga Ah Ee Hawlaha U Tababaran
Tüvasaş 11. Ka qaybqaatay Golaha Gaadiidka Badda iyo Isgaadhsiinta
Tunnel of Dallikavak
Kafeteriyada oo ka dhacaya Abaalmarinta Xarunta Dhexe
Gawaarida telefishanka ee ka imaanaya shirarka shirarka
Xilliyo cabsi leh oo ku saabsan gaadiidka telefoonka ee shirwaynaha Uludağ